AFFM – CTUM
Published by ctum at May 27, 2020
အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးနူန်းသက်သာတဲ့ ကြက်သွန်တွေကို AFFM တောင်သူတွေဆီက တိုက်ရိုက် ရောင်းချ
သမဂ္ဂညီအစ်ကိုမောင်နှမများ…အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးနူန်းသက်သာတဲ့ ကြက်သွန်တွေကို AFFM တောင်သူတွေဆီက တိုက်ရိုက် ၀ယ်ယူ ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်။ 09979623359 Asapilot project, AFFM startedasmall-scale business involving three of its farmers. AFFM began […]
Published by ctum at May 16, 2020
New Way or Mirae အထည်ချုပ်အခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင်များအား ဆန် ဆီ ကြက်ဥ များပေးသွားမည်
16-5-2020 ရက်နေ့တွင် New Way or Mirae အထည်ချုပ်အခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင်များအား ဆန် ဆီ ကြက်ဥ များပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ကြက်ဥကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) မှ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် စက်ရုံအရောက် ကြက်ဥများလာရောက်ရောင်းချပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးပါ။အလုပ်သမားများ နှင့်အဖွဲ့ဝင်များကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ကြက်ဥ ကြက်သွန်းနီ အားလူး နှင့် ခြံထွက် သရက်သီး […]
AFFM နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှု့ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ
မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (AFFM) နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှု့ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီနှင့် 18-12-2019 နေပြည်တော် (I. 10) အဆောင်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲးတွင် (AFFM) စတင်တည်ထောင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် ‌လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို (AFFM) အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါ်သဲ၀င့်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီ၊ (CTUM) မြန်မာနိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာအလုပ်သမား […]
Published by ctum at November 15, 2019
မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ (၁၆) ရက်နေ့ထိ တောင်သူလယ်သ မား ဖိုရမ်ကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သခင် ဖိုးလှကြီးလမ်း Grand Mercure Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်နေပါသည်။ ဖိုရမ်ပွဲးတို့ကို စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ။ ပြည်သူလွှတ်တော် […]